Taariikhda Imaam Al-Bukhaari – Wajibad
Taariikhda Imaam Al-Bukhaari
Muxammad Ibnu Ismaaciil Al-Bukhaari Al-Jucfi
Abuu Cabdullaahi Muxammad Ibnu Ismaaciil Ibnu Al-Muqiirah Ibnu Bardiizbah Al-Jucfi Al-Bukhaari.
Carabi: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري
Muxammad Ibnu Ismaaciil Al-Bukhaari [محمد بن اسماعيل البخاري ]. Wuxuu dhashay salaada jimcaha ka dib bishii Shawwaal 13keedii sannadka hijrida 194, sannadka milaadiyada 19 July 810. Magaalada la yiraahda Bukhaari ee ku taal Khorasaan ee waqtiga xaadarka ah loo yaqaana Uzbekistan.
Dadka inta cilmiga Axaadiista wax ka taqaan, Imaamul Bukhari waxay u aqoonsan yihiin inuu ka mid yahay shaq siyaadka ugu muhiisan taariikhda umadda Islaaamka. Bukhaari wuxuu ku soo biiriyey dhaxal tooyada umadda Islaamka kitaab kiisa loo yaqaan Saxiix-ul-Bukhaari laakiin isagu uu u bixiyey Saxiixul Jaamic oo ah midka ugu saxiixsan kutubta qoran, Qur’aanka ka dib kaas oo Culimdu isku waafaqsantahay inuu yahay Bukhaari Imaamu ahlul Xadiis iyo ninka ugu xifdin badan sunada Nabiga (scw) waana kitaabka loogu kalsoon yahay agtooda Kutubta lixda ah ee waa wayn ee loo yaqaan Situ Umuhaat kuwaas oo kala ah:
Sunan Abii Daa’uud,
Sunan Ibnu Maajah iyo
Sunan An-Nisaa’i .
Dhalashadii Imaam Bukhaari ”raxima hu laah”
Bukhaari wuxuu xifdiyey oo dusha ka qeybey 300.000 – kun oo Xadiis(Sadex-boqol-oo kun oo xadiis) 100.000-kun (Boqol-kun) oo ka mida ay saxiix wada tahay, iyo 200.000-ku (laba boqol oo kun) oo aan saxiix ahayn.
Dhacdadaasi waxay muu jisay xeel dheeraanta aqoontiisa xifdiga iyo garashadiisa Cilmiga Xadiiska Nabiga (scw), Bukhaari wuxuu u adeegsaday inuu ku uruuriyo inta ugu saxan uguna hubsan Axaadiista nabiga (scw) kuna qoro hal kitaab. Bukhaari wuxuu yiri “Xadiis kasta oon ku qoray Kitaabkeyga labo rakco baan u tukadey, Allaah baan kala tashaday (Istikhaara), sixadiisana waan hubsaday.” Waxey ku qaadatay 16-sano (lix-iyo-toban-sano) inuu ku dhameeyo qorista kitaabka Caanka ah ee uu garanayo Qofkasta oo Muslima oo wuxuun diina garanaya amase maqlay Nabigaa (scw) sidaa yiri A-Saxiix-ul-Bukhaari. “
Waa Xujjo aniga iyo Allaah noo dhexa” buu Imaamku yiri. Markuu dhammeys tirayna wuxuu u bandhigay Axmed Inbu Xanbal, Yaxyaa Ibnu Maciin, Cali Inbu Madiini, iyo Rag kale kuligoodna waxay u qireen kitaabkiisa sixid iyo sugnaan. Arrintaasi waxey noqotey ficil aad loo mahadiyey nacfigiisa iyo wax tar kiisana maanta la qirsanyahay oo qofkii Xadiis soo daliiliya ama sheega haduu yiraahdo Rawaahul Bukhaari aan laga daba hadlayn Muslimiintuna ku qanacsan yihiin inuu yahay warkii Nabiga (scw) ilaahow qabriga kuu nuuri sidaad sunada u nuurisay.
Markuu muddo ka maqnaa Bukhaara ayuu bukhaari go’aansaday inuu ku laabto dad kiisii iyo magaaladiisii. Markey maqleen reer Bukhaara safarka bukhaari ee xagooda ah, farax iyo ray-reyn baa ka buuxsamay. Waxay diyaariyeen qaabilaad aan hore loo arag, xatataa magaalada duleedkeeda bey Teendhooyin ka dhiseen.
Markuu Bukhaari magaalada yimid, wuxuu durbadiiba guda galay baarista Axaadiista Nabiga (scw) . Hase yeeshee waxaa damcay inuu handado,qash-qashaadna ka deyn waayey ninkii Bukhaara xilligaa waalli-ga (amiirka) ka haa ee la oran jiray Khaalid Binu Axmed Ad-duhaley ugana ahaa Khuraasaan dowladii Cabbaasiyyiinta.
Wuxuu Imaamka ku yiri amiirkaas sida lagu yaqaan raga madaxda ah inay amar taag leeyaan, gurigeyga caruurta wax iigu bar, Bukhaari wuxuu si geesinimo leh ugu jawaabey, “Ma rabo inaan ku xadgudbo sharafta cilmiga oo la meeraysto iridaha guryaha madaxda, ee haddii cidi rabto iney aqoon kororsato ha timaado dugsigeyga.” Waalli-gii Bukhaara baa hadalka sheekha ku celiyey oo yiri “ Haddii wiilkeygu dugsigaaga yimaado, ha la fariisin ardada kale ee gooni wax ugu dhig.”
Bukhaari baa yiri, “Qofna kama mancin karo xadiis dhegeysigi.” Oo macnaheedu yahay wiilkaaga gooni wax ugu dhigi mayo Imaamku Gacanta ayuu ku dhuftay dalabaadkii ka imaanayey Madaxtooyda taas oo ay ku guul daraysteen Culimo Badan oo joogta xili kasta, kuwaas oo ku mutaystay magaca meel walba looga yaqaan ee Culumaa’u Dowlah (culimada dowlada).
Imaamku Asagoo xannuunsan ayaa ergo ka socota Samarqandi codsaneysana inuu magaalada soo galo u timid. Markuu ajjiibeyna xanuunkii baa ku sii kordhay. Imaamku wuxuu geeriyooday habbeenkii Ciidu-al-Fidri-ga ee bisha Shawwal kawda aheyd, 256H. Cumrigiisu wuxuu ahaa Imaamka 62 sano oo laba-iyo-toban habeen dhimman markii la oof-saday Imaam Bukhaari.
Waxaa hubaal ah in sanadkaas qoraxdii aqoonta cilmiga xadiiska dhacday. Waxaa damay oo shiiqay ilayskii aqoonta ee u ifayey shucuubtii degeneyd Samarqand, Bukhara, Baqdaad, iyo Nisaabuur. Imaam Bukhaari, Allaha u naxariistee, si weyn baa loo tabey, Ragii xiligaa joogey ee gabayaaga ahaa waxay mariyyeen gabayo boroordiiq ah ooy ku cabbireen siday Imaam-ka u tabeen.
Muqadama Fatxul baariga: Xaafid ibnu xajar
Siyaru aclaamu Nubalaa: Imaamu Thahabi.
Kala xiriir: E-mail: risaala@msn.com